ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलको ग्राण्ड फिनाले सेप्टेम्बर १७ मा, के भन्छन् संयोजक राज रेग्मी ? « Asia Sanchar : Nepal News Live
प्रकाशित मिति : 17 June, 2021 8:42 pm
दोहा, ३ असार – गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागले आयोजना गरेको ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल–२०२१ को नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको छ।
एनआरएनए मध्यपूर्व युवा विभागले भर्चुअलमार्फत् पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै एनआरएन आइडलको ग्राण्ड फिनाले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १७ मा हुने घोषणा गरेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागका संयोजक राज रेग्मीले कोभिड–१९ का कारण विविध कठिनाई भएकाले ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलको मिति हेरफेर भएको बताएका छन्।
पियानो राउण्ड जुलाई ९ मा हुनेछ। यस राउण्डमा प्रवेश पाएका ३० जनाले स्वतः गाला राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन्। पियानो राउण्डमा कुनै पनि प्रतियोगीहरूले प्रस्तुति दिनुपर्ने छैनन्। ‘प्रतियोगीहरूको भोटिङ निरन्तर खुल्ला नै रहने छ,’ उनले भने।
दोस्रो गाला राउण्डमा १३ अगस्टमा हुने छ। यस राउण्डमा प्रवेश गरेका २५ जना प्रतियोगीमध्ये दोस्रो गाला राउण्डबाट ५ जना प्रतियोगीहरू बाहिरिने गुरुङले बताए। ‘बाँकी २० जना प्रतियोगी तेस्रो गाला राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन्,’ उनले भने।
तेस्रो गाला राउण्ड २० अगस्टमा हुने छ। यस राउण्डमा प्रवेश गरेका २० जना प्रतियोगीमध्ये तेस्रो गाला राउण्डबाट ५ जना प्रतियोगीहरू बाहिरिने आयोजकले बताएको छ। ‘बाँकी १५ जना प्रतियोगी ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउनेछन्,’ गुरुङले भने।
सेमी फिनाले राउण्डको ३ सेप्टेम्बरमा हुनेछ। ‘अन्तिम चरणबाट प्रवेश पाएका १५ जनामध्ये पहिलो चरणबाट ५ जना प्रतियोगीहरू बाहिरिने छन्,१० जना प्रतियोगीहरूले फिनालेमा प्रवेश पाउनेछन्,’ संयोजक गुरुङले भने।
र, फिनाले राउण्ड १७ सेप्टेम्बर, २०२१ मा ११ बजेदेखि १ बजेसम्म हुने एनआरएनए मध्यपूर्व युवा संयोजक राज रेग्मीले बताए। ‘फिनालेमा प्रवेश पाएका १० जनामध्ये थप ५ जना प्रतियोहरु बाहिरिने छन्।
ग्राण्ड फिनाले (१७ सेप्टेम्बरमा २ बजेदेखि ५ बजेसम्म हुने रेग्मीले बताए। ग्राण्ड प्रवेश पाएका १० जनामध्ये थप ५ जना पहिलो राउण्डबाट बाहिरिने छन्। ग्राण्ड फिनालेको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका ५ जना प्रतियोगीहरूलाई क्रमशः पाँचौ, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो गरी सार्वजनिक मतका आधारमा निर्णायक मत उद्घोष गरी विजेता घोषणा गरिने रेग्मीले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा कसले के भने?
सचिव शर्माले नेपालबाट विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरूले सांगीतिक यात्रालाई जोगाइराखेकाले अब एनआरए आइडलमार्फत् विश्वलाई देखाउन सक्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, संघका सल्लाहकारद्वय टिबी खड्का र सोम सापकोटा तथा एनआरएनएकी मानार्थ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य याश्मिन बेगम लगायतले ग्लोबल एनआरए सिंगिङ आइडलको आयोजनाले गैरआवासीय नेपालीहरूको कला र सांगीतिक जीवन अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन्।